"Nigerian bread": Making the people say "Yes" izany (3)
Posted by: Anie Anokuru Aprily 17, 2013
Ity fizarana farany, ny ezaka amin'ny fanarahana ny fangatahana (araka ny voalaza tetsy aloha) noho ny fanehoan ny fomba fijeriko momba ny foto-kevitra eo ambony amin'ny alalan'ny fitaovana ity, Manasongadina ny toerana iray momba izay tokony hatao eo amin'ny toerana tahaka ny paik'ady barotra. Natao hanamorana tsy manao "Nizeriana mofo" misy, fa handrisika vokatra fanekena - Spurring Nizeriana mankany amin'ny hoe "Eny" ho azy. Rehefa nanazava aloha, "Nizeriana mofo", toy ny mari-pamantarana, dia ampiasaina interchangeably amin'ny "mofo mangahazo".
Ankoatra ny vahoaka Nizeriana fa nenjehin'ny tsena ho an'ny barotra paikady tena ilaina ny "mofo Nizeriana", ny toerana ny Tompo dia mbola tena manan-danja Baker. Ny mpanjifa ny vokatra izany dia afaka mampiasa fotsiny ihany ny mpanao mofo, raha manao izany,. Noho izany, ankoatra ny faritra manan-danja voalaza ao amin'ny famelabelarana teo aloha, ho an'ny mpanohana ny "mofo mangahazo" mba manana ny fomba, ny Tompo no ho mpanao mofo ampy ho nahita fianarana jettison sarotra aza na inona na inona filazana izay Nasiana firesahana tsy mivantana ny mangahazo (e.g. fofona). Tsy maintsy antitranterina ho an'izay mangahazo mifototra amin'ny soatoavina mamorona vokatra ara-pahasalamana-hendry sy mampitombo ny vokatra, toy ny mangahazo koa ny koba tsara toto mampihena ny vola lany amin'ny famokarana.
Miaraka amin'ny fanampiana ny alalan 'ny fanomezana ny vola tsehatra, ara-teknika mifandraika fanohanana sy fampiofanana fandaharana, Ary milaza ny Tompo Baker dia tsy ho avy ho an'ny rehetra izay rehetra azony atao mba hanafotra ny tsena Nizeriana amin'ny Output homarinana avy amin'ny fampidirana ny lafarinina mangahazo amin'ny 40% ho lafarinina varimbazaha? Izany no amin'izao fotoana izao fa ny governemanta federaly dia nanomboka kivy ny fanafarana ny vary koba tsara toto amin'ny alalan'ny hetra (izay diplaoma ho miakatra rehefa mandeha ny fotoana). Io fanohanana izany dia tokony hatao ihany koa ny ho avy ny fomba madinika sy Medium mifandray Enterprises (salantsalany izay), toy ny mpamokatra ny confectioneries sy caterers. I mahita ny toe-javatra andraisana izany hena-henan'omby, mofomamy, donut, 'Samossa', Chin-saoka, sns, ianao gobble (ary na dia mangataka bebe kokoa) atao amin'ny mpamatsy sakafo ireo vokatra, dia homarinana avy amin'ny fampidirana ny mangahazo koba tsara toto ho lafarinina varimbazaha.
Fa ny olona ho mora manaiky manoloana "Nizeriana mofo", ireo singa ny tetika tsy azo odian-tsy hita dia tsy maintsy:
Samy ny afovoany sy ny farany ambany dia tokony ho ny tsena ny tsena lasibatra ny "mofo Nizeriana", na dia izay manaiky fa ilaina ny sasany endriky ny vokatra hafa, mba handraisana mpanjifa fitondran-tena ny afovoany tsena. Na dia eo aza mofo ho nanohana ho toy ny foto-Nizeriana sakafo (ny sasany aza milaza fa mampiray ny olona noho ny fandaniana faobe ara-tsosialy sy ara-toekarena miaraka strata), izay homarinana avy amin'ny fampidirana ny mangahazo koba tsara toto ho lafarinina varimbazaha dia tsy maintsy hisy fiantraikany amin'ny ampahany manan-danja ao amin'ny tsena ho an'ny vokatra tiana fankatoavana.
"Nizeriana mofo" ho avy tamin 'ny endriky ny mahazatra Nizeriana dia zatra - Ankoatra tsy ho ampy amin'ny koba tsara toto Nampitambatra ny mangahazo ho lafarinina varimbazaha, ny mahazatra habe sy endriky ny mofo dia tsy maintsy mampihatra. Tokony ho avy amin'ny 'tsy tapaka, na kely fotsy mofo volontsôkôlà' toe-tsaina (amin'ny mafy brownish sosona ivelany sy fotsy malefaka anatiny fa 'mitaona') fa ny ankapobeny karazana mofo. Ny fampifanarahana natao ho an'ny tsena ny farany ambony dia tokony mampiseho ambony kalitao sy ny manan-karena anatiny – Avia manontolo na nivava; fonosana tsara tarehy mitondra ny lanjan'ny soratra isaky ny ampahany fangaro, fitehirizana vanim-potoana sy ny toe-javatra, lanja afa-karatsaka, mpanao mofo 'anarana sy adiresy; ary avy eo ho an'ny fanomezan-toky, NAFDAC (National Agency for Food, Zava-mahadomelina Administration sy ny Control) fisoratana anarana isa.
Fa mazava ny antony, "Nizeriana mofo" dia tokony hanana talantalana vidin-javatra tsara kokoa ho an'ny mandevona-bahoaka, noho izay rehetra mahazo ny mofo vary ankehitriny. Izany vokatry avy amin'ny tarika ambany be ny vidin'ny famokarana ity mofo ity eo amin'ny ampahany ny mpanao mofo, izay mazava ho azy fa ny vola lany amin'ny fiantraikan'ny mpanelanelana (mpanelanelana), ary farany izay ny talantalana (antsinjarany) vidiny tokony ho. Aiza izany no tsy ny raharaha, ny tarehy ny "Nizeriana mofo" dia ho very, ary andrasana fiahian'ny etỳ ny lalanao.
Fa ny foto-kevitry ny "Nizeriana mofo" ho fahombiazana, fanamafisana dia tokony hapetraka amin'ny "hanoto paik'ady" mba hanohanana ny mpanao mofo manerana ny firenena (izay hijery indray kosa niakatra ho any amin'ny millers). koa, noho ny antony voalaza etsy ambony sy ny mpamokatra ny confectioneries caterers eo an-toerana dia tsy tokony odian-tsy hita.
A araka ny tokony ho voasoratra ara-panjakana, mora fantatra, Logo tokony ho nampidirina ho toy ny endri-javatra miavaka ny mofo misy singa amin'ny koba mangahazo. Izany no ho fanamorana ny vokatra mahomby marika. Co-marika momba ezaka fampiroboroboana izay mitaky fiaraha-miasa amin'ny eo an-toerana voafantina mpanamboatra ny fiderana entana (e.g. margarine, kakaô zava-pisotro, ary ny dite) dia tena manampy mankany amin'ny fanekena ny Nizeriana. Fa mahakasika ireo dia tsy maintsy ho voasambotra koa ho cognizance – Teknika-bahoaka fifandraisana, asa varotra hatsarana, dokam-barotra, fampiroboroboana ny varotra, ary experiential / fampahavitrihana fahan'ny. Amin'ny maha-teny mpanoratra, Aho fijerena ny sehatry ny fahitalavitra ara-barotra iray mampiseho ny "Agoyin" tsaramaso mpivarotra mifanaraka amin'ny fankasitrahana ny "mofo Nizeriana". Tsy misy zava-miafina fa ireo izay ahitana ny tsena faobe amin'io lafiny io manaraka ilay hevitra hoe tena tsara mofo mandeha miaraka amin'ny tsaramaso hanina sy sakafo ketsaketsa.
Amin'ny maha-iray amin'ireo izay mihazona mafy ny fomba fijery izay, "Ny fomba tsara indrindra milaza ny hoavy dia ny hamorona azy", ny ho avy ny "Nizeriana mofo" ho toy ny zavatra manan-danja ny vokatra amin'ny fanekena ity toa tena mamirapiratra clime. Nanangana ny zavatra efa fandraràna tanisaina ao ny manaiky ato amin'ity andian-dahatsoratra tsy isalasalana paves ny lalana ho inona izany ho an'ny Nizeriana maka hoe "Eny" ho azy. Ny firenena mitsangana hanao soa be dia be, raha faobe fanekena ny foto-kevitry ny "Nizeriana mofo" no tratra.
Aoka ianao ho voalohany haneho hevitra amin'ny ""Nizeriana mofo": Ny fanaovana ny olona hoe "Eny" ho azy (3)"